Asọmmpi GOtvBoxingNight16 kporo ekpo – hoo!haa!!
Legọsị: Asọmmpi GOtvBoxingNight e mere n’abalị ụka n’ama egwuregwu Teslim Elias dị na Surulere, Legọsị kporo ekpo.
Taiwo “Esekpọ” Agbaje, ọkaibe otiọkpọ nke asọmmpi ahụ nwetara iko nturugo nke ncheta Mojisola Ogunsanya ya na ihe nrite Otu Nde Naịra n’ọkara so ya n’azụ.
Ya bụ otiọkpọ amakebeghi aha ya nọ n’ogoogo “Lightweight” mere ndi nkiri anya obi ụtọ site n’otu o si jiri obi dịmkpa were na-eti ọkpọ ahụ bụ nke ọ nọrọ merie Tope “TP Rock” Musa.
Onye ọzọ tiri ọkpọ ka ochie dike bụ Rilwanu “Real One” Oladosu nke Naịjiriya, onye meriri Benjamin Lamptey nke mba Gana iji turu ugo dịka ọkaibe ọhụrụ n’ogoogo lightweight nke West African Boxing Union (WABU).
Adewale “Masevex” Masebinu, titukwara Kabiru “KB Godson” Towolawi iji bọrọ ọbọ maka mmeri o meriburu ya ma turukwa ugo dịka ọkaibe ọhụrụ ala anyị n’ogoogo lightheavyweight. Udiri ọkpọ kpụ ọkụ n’ọnụ ọ na-akụ mere ka Towolawi chilie aka elu n’agba nke ise n’ọgụ ahụ.
Ihe kacha ịtụ n’anya n’abalị ahụ bụ ọgụ dị n’etiti Opeyemi “Sense” Elijah onye dị sọọsọ afọ iri n’asaa na Sheriff “Oshe” Ogunbajọ dị afọ iri abụo n’anọ. N’agbanyeghị na onye ọ bụ ya na ya tọrọ ya ma kakwara ya ogo, Sense gosiri na “onye lịa obi, ọ bụrụ dike”. Nke ụtọ bụ etu o si amagharị ka odogwu otiọkpọ bụ Mohammed Ali.
Nkea bụkwanụ ọgụ mbụ ya n’udiri prọfe ( professional)
Previous Post: ONYE
Next Post: UKWU (WAIST)/ỤKWỤ (LEG)/UKWU(BIG)